Noho izany dia te hitondra ny boky ny mpamaky ny porofo tsy tambo isaina ny fisian’Andriamanitra sy ny zanany lahy tokana i Jesoa Kristy. Izany no mba rehetra kokoa ny « mpino fa sachants ».
Aho tamin’ny farany maintsy nankany amin’ny porofo sy mahita fa ny famantarana rehetra sy ny faminanian ‘ny fotoana farany hialoha ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia tanteraka isan’andro sy izay mety izany amin’ny fomba rehetra ho kisendrasendra toy ny maro ny faminaniana izay tanteraka dia zava-dehibe.
Izany no nanova ny fiainako tanteraka ary noho izany dia nanapa-kevitra ny hamorona ity bilaogy « Ny mpitory Miverena ao amin’ny mpanjaka » izay namoaka lahatsoratra maro amin’ny fiteny rehetra mba hampahafantatra ny olombelona rehetra ity hetsika mahafinaritra sy mandray anjara ihany koa fifohazan’ny tontolo izao ny Kristianina rehetra mba afaka miomana ny sainy sy ny fanahiny ho amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjaka, izay zanakalahy tokan’ny Andriamanitra.
Dia zava-dehibe sy zava-dehibe ny mahatsiaro fa Hoy i Jesosy Kristy: « Izaho no lalana, ny fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny ahy. «